IYunivesithi yaseConell University Camp Tour
IHolo yeSage University yaseYunivesithi
IHolo yeSage University yaseYunivesithi. I-Credit Credit: Allen Grove
Kwavulwa ngo-1875 ukuya kubafundi bebhinqa bokuqala be-Cornell, uSage Hall usandul 'ukulungiswa ngokutsha ukuze abe yindlu kwiSikolo sikaJohnson, esikolweni seshishini seyunivesithi. Isakhiwo sokwakhiwa kwesimo sezulu ngoku sineechwepheni ezingaphezu kwe-1 000 zekhompyutha, iThala leThala leeNkcukacha, igumbi lokuthengisa elithembekileyo, amagumbi eeprojekthi, amagumbi okufundela, ihholo lokudlela, ii-video-conferencing facilities kunye ne-atrium enkulu.
I-University of Cornell McGraw Tower kunye ne-Uris Library
I-University of Cornell McGraw Tower kunye ne-Uris Library. I-Credit Credit: Allen Grove
UMcGraw Tower mhlawumbi isakhiwo sezobugcisa kakhulu kwi-campus yase-Cornell University. Iibhokhwe ezingama-21 zikhupha kwiikonkoni ezintathu ngosuku oludlalwa ngabafundi be-chimesmasters. Ngamanye amaxesha abantu abavakatyelayo banokunyuka ngamanqanaba angama-161 ukuya phezulu kwinqaba.
Isakhiwo esiphambi kwinqaba i-Uris Library, ikhaya kwikiti kwizentlalo zentlalo kunye noluntu.
IYunivesithi yaseConell Barnes Hall
IYunivesithi yaseConell Barnes Hall. I-Credit Credit: Allen Grove
IHome Barnes, isakhiwo samaRoma esakhiwe ngo-1887, sihlala kwikhaya eliphambili lokusebenzela uMnyango weMculo waseConell. Amakhonsathi omculo wesigcawu, ama-recitals kunye neentsebenziswano ezincinci zonke zenzeke kwiholo ekwazi ukuhlala ngo-280.
Isakhiwo sisekhaya lelayibrari yephambili yeYunivesithi yaseConell, kwaye isikhala sisoloko siqhutyelwa ngabafundi abaphanda izikolo zonyango kunye nomthetho okanye ukukhangela izixhobo zokuvavanya izikolo zokubakholwa kwezikolo.
Ihotele yase-Cornell University Stater
Ihotele yase-Cornell University Stater. I-Credit Credit: Allen Grove
I-Statler Hotel idibene ne-Statler Hall, ekhayeni kwiSikolo soLawulo lwee-Hotel saseConell, ngokuqinisekileyo isikolo esona sihle kakhulu kwilizwe. Abafundi bahlala behlala kwihotele yegumbi le-150 njengengxenye yeklasi yabo, kwaye iNkcazo yesikolo seehotele kwiNkcazo yeWines yenye yezona zidume kakhulu ezinikezelwa kwiyunivesithi.
I-Quad yeYunivesithi yaseConell Engineering - iDuffield Hall, u-Upson Hall kunye neDil Dial
I-Quad yeYunivesithi yaseConell Engineering - iDuffield Hall, u-Upson Hall kunye neDil Dial. I-Credit Credit: Allen Grove
Isakhiwo ngakwesobunxele kule sithombe nguDuffield Hall, indawo ephakamileyo ye-nanoscale yesayensi nobunjineli. Ukunene u-Upson Hall, ikhaya kwiSebe lezeNzululwazi yeConell kunye neSebe loBunjineli be-Aerospace.
Ngaphambili kukhona enye imifanekiso eqingqiweyo eyaziwayo e-yunivesithi, iPew Sundial.
I-Laboratory yaseBlue Baker yaseYunivesithi
I-Laboratory yaseBlue Baker yaseYunivesithi. I-Credit Credit: Allen Grove
Yakhiwa kungekudala emva kweMfazwe Yehlabathi I, iLebhu yeeBebhenge i-200,000 square square building yokwakhiwa kwe-neoclassical. ILebhu yeeBhabyil yekhaya iCommell's Chemistry kunye neCandelo leChrology Biology, i-Chemistry Research Computing Facility, i-Nuclear Magnetic Resonance Facility kunye ne-Advanced ESR Technology Research Centre.
IYunivesithi yaseConell McGraw Hall
IYunivesithi yaseConell McGraw Hall. I-Credit Credit: Allen Grove
Eyakhelwe ngo-1868, iHolo likaMcGraw linomdla wokuba neyokuqala kweendonga zeConell. Isakhiwo sakhiwe ngamatye aseItca kwaye siyikhaya le-American Studies Programme, iSebe leMbali, iSebe le-Anthropology, kunye ne-Archeology Intercollege Programme.
Umgangatho wokuqala we-McGraw Hall uhlala kwiMyuziyam yoLondolozo lweMbali yaseMcGraw, iqoqo lezinto ezingama-20,000 ezivela kwihlabathi jikelele ezisetyenziselwa ukufundisa kwiSebe le-Anthropology.
IYunivesithi yaseConell yaseOlin
IYunivesithi yaseConell yaseOlin. I-Credit Credit: Allen Grove
Eyakhelwe ngo-1960 kwisayithi ye-Old School yase-Cornell, ilayibrari ye-Olin ihleli kwicala lasezantsi lezobuGcisa i-Quad kufuphi ne-Uris Library kunye noMcGraw Tower. Esi sakhiwo seenyawo ezingama-240,000 sinobambelelo ikakhulu kwizinzululwazi zentlalo kunye noluntu. Ukuqokelela kuqulethe iinguqu ezi-2,000,000 zokuprinta, ii-2,000,000 ze-microforms kunye namabalaphu angama-200,000.
IYunivesithi yaseConell i-Olive Tjaden Hall
IYunivesithi yaseConell i-Olive Tjaden Hall. I-Credit Credit: Allen Grove
Elinye lezakhiwo ezininzi ezithintekayo kwi-Arts Quad, iOlive Tjaden Hall yakhiwa ngowe-1881 kwisitayela samaGothic sama-Victori. I-Olive Tjaden Hall yindlu yeSebe lase-Cornell ne-College of Architecture, i-Art and Planning. Ngethuba lokuvuselelwa kwangoko kwakhiwo, i-Olive Tjaden Gallery yakhiwa kwisakhiwo.
ILayibrari yaseYunivesithi yase-Cornell
ILayibrari yaseYunivesithi yase-Cornell. I-Credit Credit: Allen Grove
Indawo yaseYunivesithi yaseConell ibangele kwindawo yokwakha eyakhayo njengolu hlobo lwangaphantsi kwe-Uris Library.
ILibrari ye-Uris ihleli kwisiqithi seMcGraw Tower kunye neendlu zeengxowa-zenzululwazi zentlalo kunye noluntu kunye nokuqokelela iincwadi zabantwana. Ithala leencwadi libuyele kwikhaya lamabhabhi amabini.
IYunivesithi yaseConell eLincoln Hall
IYunivesithi yaseConell eLincoln Hall. I-Credit Credit: Allen Grove
Njenge-Olive Tjaden Hall, iLincoln Hall yikwakhiwa kwelityhi ebomvu ekwakhiwe kwinqanaba eliphezulu lase-Victorian Gothic. Isakhiwo sikhaya kwiSebe leMculo. Isakhiwo se-1888 salungiswa kwaye sandiswa ngo-2000, kwaye ngoku iqulethe amagumbi okufundela ngeendawo zobugcisa, amacandelo okufundela nokuhlaziya, ithala leencwadi zomculo, indawo yokurekhoda, kunye neendawo ezahlukeneyo zokuphulaphula nokufunda.
IYunivesithi yaseUnner u-Uris
IYunivesithi yaseUnner u-Uris. I-Credit Credit: Allen Grove
Eyakhelwe ngo-1973, u-Uris Hall yindlu yeConell yeSebe lezoQoqosho, iSebe lezeNgqondo, kunye neDeat of Socialology. Amaziko amaphando amaninzi anokufumaneka kwi-Uris kubandakanywa neCandelo le-Mario Einaudi leZizwe zoPhando, iZiko loQoqosho loHlolo, kunye neZiko lokuFundisisa ukungalingani.
IHolo eYunivesithi yaseConell
IHolo eYunivesithi yaseConell. I-Credit Credit: Allen Grove
Ephakathi kwe-Olive Tjaden Hall kunye ne-McGraw Hall, iWhite Hall yindlu yokwakha ye-1866 eyakhiwe kwi-Second Empire style. Ukwakha ilitye ilitye, isakhiwo esibomvu siyinxalenye ye "Stone Row" kwi-Arts Quad. IiHolo ezimhlophe zakha iSebe leeSifundo seMpuma eMpuma, iSebe leRhulumente kunye neNkqubo yoPhuculo lweZibonelelo. Isakhiwo sinezigidi ezili-12 zezigidi zokuvuselela eziqala ngo-2002.
Zingaphi iiMiles ezihambayo kwaye iiCalori zivutha Ukudlala igalofu?
I-Biography ye-Compton Rapper Umdlalo
Reiki kwiintsana kunye nabantwana
Ngaba abantu basePuerto Ricans abafuduki eMelika?